Hevitra MPANOHARIANA | Toekarena | 6
Rohman: Mampirevy an!
2008-04-27 @ 13:37 in Toekarena
Manahirana ity siosion-dresaka ity an! Dia lazaina fa nampirevy ange, hono, ianao teny Ambohimanambola omaly sabotsy satria nitombo 14 volana indray ny fotoana itantananao ny jirama e! Dia hoe miditra indray izany, hono, ny saosy anjatony tapitrisa miditra aminao isam-bolana nefa ny olana jirama manerana ny faritra ity malaza dia malaza sady toa tsapa fa hitombo aza noho izao fiankinana tanteraka amin'ny solika avy any ivelany izao e! Soa ihany aloha fa tsahotsaho nefa aza hitako tena marina!
eisy aho eee
Toamasina : Tezitezi-poana indray Ravalomanana
2008-04-19 @ 20:05 in Toekarena
Reko tamin'ny atoandro avy tamin'izay naheno ny fahatezeran'ny filoha Ravalomanana raha nandalo tao Toamasina Andrenivohitra ekonomika izy, alohany hiondranany any amin'ny nosy Maorisy, ka nahita ny tsy mbola nahavitan'ny lalana tao. Misy ny lalana efa migodana lasa mampatahotra araka ny tatitra nataona mpanao gazety satria mirimorimo avokoa na ny fiara na ny posy-bisikileta mianoka ny hatsarany. Izao anefa, sady montotra ny lehilahy no niteny mihitsy hoe "tsy faly aho" fa mihisatra araka ny fijeriny azy ny fanamboaran-dalana.
Nanome baiko aho tamin'ny Paska (izany hoe mbola tsy ampy iray volana izay) nandalovako taty farany ny amin'ny hamitana haingana dia haingana (izany hoe atao tsy maharitra ve izany ny zavatra vita satria ny vita haingana sarotra mateza?) ity fanamboaran-dalana eto Toamasina ity. Tsy hitany akory izay fandroson'ny asa. Izaho kosa aloha mieritreritra fa sarotra ho an'ny Shinoa ny hametraka foto-drafitr'asa tsara orina ambony fasika e! Tsy vitan'ny baiko hoe "misia...lalana" manko izy ity dia misy ny lalana. Nanome baiko indray ny lehilahy fa tsy maintsy vita ao anatin'ny tapabolana io fanamboaran-dalana io. Ilay Shinoa voakiana moa nihomehy fotsiny (angaha moa mahazo mihomehy ny Shinoan'ny Tanibe?).
Ny tao an-tsaiko indray moa dia nipaka tamin'ny hoe iza indray no ho voadaka eo amin'ny toerany? Sa iza indray moa no minisitra "coach" ny faritra misy an'i Toamasina? tsy tadidiko intsony na Analanjirofo no misy azy na Atsinanana. Sa ho sahy hanala ny Shinoa amin'ny fanaovana io lalana io ve izy tsy hovaliany amin'ny tsy fanamboarana ny trano fandraisam-bahiny miezinezina ao Ivato kasaina hovitaina handraisana manam-pahefana ambony mandritra ny vovonan'ny (fivoriana faratampony) filoham-pirenena sy filoham-panjakan'ny Firaisambe Afrikana (2009)? Angamba izany koa no efa nieritreretana hananganana Tranomihaja 50 nolazain'ny minisitry ny asa vaventy sy ny fitaterana tamin'ity herinandro ity.
Fa mahalasa eritreritra ahy ihany koa fa mailaka dia mailaka izy mitsikera mivantana (fa tsy sahin'ny mbs nalefa intsony ny alin'ny Asabotsy ny sary sy ny nitenenan'ny filoha, tatitra sisa no natao raha nalefa kosa izany tamin'ny tvm) izay tsy fetezan-javatra nisy tany Nosy Be na mampiovaova matetika ny delegasioona ao, sy izao any Toamasina izao ka iandrasan'ny maro izay ho tohin'ny raharaha... fa tsy mety hitany mihitsy ny tsy fahavitan'ny tsenan'Asabotsy Antsirabe Antampontanana efa mitarazoka dimy taona izao. Toa tsy raharahany akory fa misy fandravana trano manamorona iny lalam-pirenena iny nefa dia tsy onerana izany na dia ariary aza satria "baikon'ny filoha" ny fandravana. Rehefa anehoan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ny tsy fahafaliany anefa dia izy indray no tezitra.